Uzbekistan Airways na-efe Tashkent ruo ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Uzbekistan Airways na-efe Tashkent ruo ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ Uzbekistan na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
A ga-enwe ụgbọ elu 28 kwa izu (ụgbọ elu 4 kwa ụbọchị) site na Tashkent, Uzbekistan ruo Moscow, Russia.
Ugbo elu mbu nke Uzbekistan Airways rutere na ikuku ohuru ya nke Moscow.
Oge ụgbọ elu na ụzọ Tashkent-Moscow agbaala okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere ọkwa nke 2018.
Uzbekistan Airways na-ezube ịgbasa mbara ala nke ụgbọ elu site na ikuku ikuku iji mepee ebe ọhụụ gaa obodo Uzbekistan.
A nabatara ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo Ulo elu Uzbekistan'flightgbọ elu mbụ mgbe nnyefe nke ụgbọ elu ụgbọelu na-aga n'ọdụ ụgbọelu ọhụrụ.
A ga-enwe ụgbọ elu 28 kwa izu (ụgbọ elu 4 kwa ụbọchị) site na Tashkent, Uzbekistan ruo Moscow, Russia. Oge ụgbọ elu na ụzọ Tashkent-Moscow agbaala okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere ọkwa nke 2018.
N’ịsọpụrụ mmemme a dị ịrịba ama, akwadoro mmemme mmemme maka ndị ọbịa nke ọnụ ya: agba egwu mba nke ndị otu “Bahor” na abụ ndị Uzbek nke ndị otu egwu ahụ “Uch-Kuduk” rụrụ. E nyere ndị njem onyinye nke swiiti.
Ọdụ ụgbọ elu Domodedovo na Uzbekistan Airways jere ozi karịa ndị njem 7 nde site na 2000 ruo 2018.
N'ọdịnihu dị nso, ụgbọelu ụgbọelu na-ezube ịgbasa ọdịdị ala nke ụgbọ elu site na ikuku ikuku, imeghe ebe ọhụụ na obodo Uzbekistan. Netwọk okporo ụzọ mepere emepe, nnweta njem na ọnọdụ ọnọdụ ala ọdụ ụgbọ elu ga-enye ọkwa dị elu nke ụgbọ elu na-ebufe ma na-ebufe ya.
Moscow Domodedovo Mikhail Lomonosov Airport bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kachasị na Russia. Na 2020, ọdụ ụgbọ elu rụrụ ọrụ nde mmadụ 16.4. Ndị otu njikọ ụgbọ elu ụgbọ elu ụwa niile gụnyere Star Alliance na oneworld ahọrọla ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo maka ụgbọ elu ha na Moscow.
JSC Uzbekistan Airways, na-arụ ọrụ dị ka Uzbekistan Airways, bụ ụgbọelu ụgbọelu ụgbọelu nke Uzbekistan, nke dị na Tashkent.